संसारमा कुनै राज्य "घमण्ड" यस्तो रकम नामित गर्न सक्नुहुन्छ विवाह वार्षिकोत्सव, पोस्ट-सोभियत देशहरूमा रूपमा। नियम, युरोप र अन्य देशहरूमा 25, 50 र 100 वर्ष मात्र वार्षिकोत्सव विवाह मनाउन निर्णय गरे।
शायद स्लाव भाषाहरु मान्छे - सबैभन्दा मायालु, र यसैले आफ्नो विवाह प्रतीक र बिदा पछि सँगै बस्दा लगभग हरेक वर्ष संग आउनुहोस्। यो आफ्नो भावना को दोस्रो आधा र प्रत्येक अन्य प्रेम र वफादारी को शपथ uttered जब कि शानदार दिन सम्झाउने एउटा उत्कृष्ट मौका छ।
वर्षौंदेखि विवाह को वार्षिकोत्सव आफ्नै परम्परा र मूल्य, संकेतहरू छन्, र प्रतीकात्मक रूप पनि एक प्रकारको विवाह उमेर बिताएको अनुरूप। यो दिन मा, एक राउन्ड टेबल तपाईं मान्छे आफ्नो आमाबाबु, साथी र आफन्त reassemble गर्न सक्नुहुन्छ। छुट्टी को "नवविवाहितहरूका" गर्न त्यस दिन आउन स्वीकृत जो यसको आफ्नै विशेषताहरु, पनि उपहार, छ संकेत गर्दै हुनुहुन्छ।
calico विवाह - ठीकै आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउन सक्नुहुन्छ विवाहको पहिलो वर्ष बस्थे भएको। पति र पत्नी अझै पनि सँगै अनुभव र यति आफ्नो वैवाहिक अझै पनि छैन धेरै बलियो, calico सामाग्री, सजिलै भङ्ग छ जो जस्तै छ त केही हो किनभने यो आफ्नो नाम पाए। gauze विवाह केही कल यो अहिलेसम्म मिति।
विवाह उमेर वार्षिकोत्सव छुट्टी संग सम्बन्धित छ जो सामाग्री, को शीर्षक मा "बलियो" गर्छन हुनेछ। रूपमा कागज भनिन्छ विवाह को दोस्रो वार्षिकोत्सव रूपमा प्रारम्भिक। जीवित भनिन्छ छाला छ सँगै तीन वर्ष लगाइँदै।
चार वर्ष सँगै बस्ने पछि, "जवान" ठीकै विवाह सनी वा डोरी मनाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यो समयमा, पति र पत्नी पहिले नै प्रत्येक अन्य ठेगाना र आफ्नो जीवन शैली "प्रयोग भयो", सन फाइबर, राम्ररी प्रत्येक अन्य संग intertwined जो र तिनीहरूले अब तोड्न त सजिलो हो संग तुलना।
यस पूर्व, सबै मिति विवाह, वार्षिकोत्सव र थप अब वार्षिकोत्सव थिए, पहिलो गम्भीर कारण सकिन्छ काठ विवाह - यो विवाहको5वर्ष छ। रूख - यो पारिवारिक सम्बन्ध बल प्रतीक भनेर एकदम कठिन सामान छ। यो कि विश्वास छ यो वार्षिकोत्सव आवश्यक मनाइन्छ गर्नुपर्छ, यो दिनमा एक परिवारको घर आउन जो अतिथि काठ घरेलू वस्तुहरु दिनुपर्छ। यो एक हुन सक्छ , काट्ने बोर्ड वरदान यो दिन उपयुक्त हुनेछ रूपमा तातो पकवान लागि खडा, पनि एक रोलिंग पिन।
फलाम विवाह, सँगै बस्दा6वर्ष मा मनाइन्छ जो पछि लागे। यो कुरा फलाम विपरीत, एकदम भंगुर सामाग्री मा, मानिन्छ कि छ, र यो कि हुन्छ संकट प्रतीक परिवार सम्बन्ध जीवनको 6th वर्ष मा। सम्बन्ध, डाली फलाम जस्तै दरार र कुनै पनि समय अलग पर्न सक्छ।
अर्को वार्षिकोत्सव (7 वर्ष), तामा विवाह भनिन्थ्यो। म विवाह अक्सर बहुमूल्य सामाग्री सम्बन्धित नाम हुनेछ वार्षिकोत्सव भन्न पर्छ। यो पहिलो तामा विवाह मिति, विवाहित सम्बन्ध spouses लागि धेरै महत्त्व प्राप्त गरेको छ देखि, बलियो, तर पनि धातु एक मूल्यवान संग मात्र सम्बन्धित छ जो मानिन्छ।
टिन र faience विवाह, जो 8 र9वर्ष जीवन सँगै बस्ने अनुरूप द्वारा पछि लागे।
विवाहको 10 वर्ष टिन विवाह भनिन्छ वार्षिकोत्सव, मनाउन। यो दिनमा पाहुनाहरूलाई टिन को कुनै पनि उत्पादन दिन पर्छ। यो धातु, जोडी बीच सम्बन्ध जस्तै धेरै लचिलो छ कि विश्वास छ।
एक इस्पात विवाह, एक निकल पछि - - 12 वर्ष '11 विवाहमा टिकाउ र बलियो सम्बन्ध यस छुट्टी को नाम दिए।
बेल विवाह यस समयमा, परिवारमा सम्बन्ध फेरि धेरै पातलो छन् र कुनै पनि क्षण विच्छेद गर्न, 13 वर्ष सँगै बस्ने पारस्परिक रहेको छ।
तर अर्को वर्ष, मानिन्छ जो एक अवधि एक सम्बन्धमा बलियो छ। को spouses 14 वर्षसम्म सँगै बस्ने गरेका छन् भने, तिनीहरूले डर केही छ, त्यसैले वार्षिकोत्सव agate विवाह नाम थियो।
क्रिस्टल विवाह - spouses बीच विश्वसनीय सम्बन्ध 15 औं वार्षिकोत्सव को नाम दिइएको थियो। सफा र घन्टी क्रिस्टल यद्यपि, छ, एक उच्च शक्ति। उनीहरूसँग छ र तुलना पति र पत्नी बीचको सम्बन्ध। म यो वार्षिकोत्सव क्रिस्टल बर्तन दिन निर्णय: vases, चश्मा, आदि
विवाहको 18 वर्ष छोराछोरी हुर्किसकेका गर्दा spouses, को पनप सम्बन्ध आउँछ, र आमाबाबुले अझै पनि जवान र ऊर्जा, "फिरोजा विवाह" भनिने छुट्टी भरिएका छन्।
20 वर्ष पछि, सँगै तपाईं, तिनीहरूले धेरै नाजुक र कुनै पनि समयमा फेरि हुन सक्छ किनभने, धेरै आफ्नो सम्बन्ध व्यवहार होसियार आवश्यक जब "ब्रेक" फेरि त्यहाँ एक समय आउँछ बस्ने, त्यसैले यो मिति भनिन्थ्यो "बरतन विवाह।"
र फेरि पद विवाह वार्षिकोत्सव हामी अनमोल धातु, चाँदी हामी ध्यान यस समय पूरा, को महान र टिकाउ सामाग्री - चाँदी विवाह - यो 25 वर्ष सँगै छ।
मोती विवाह संयुक्त 30 वर्ष पछि मनाइन्छ। कोरल वा सनी विवाहको 35 वर्ष मा, बच्चाहरु र नातिनातिनी मिलेर एक ठूलो परिवार तालिका मा बटोरता।
50 वर्ष विवाहमा खर्च पछि वार्षिकोत्सव जसको नाम सबैभन्दा मूल्यवान र टिकाउ सामाग्री को एक संग सम्बन्धित छ, celebrates। सुनको विवाह सबैभन्दा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण छुट्टी हुन मानिन्छ। यति धेरै वर्षसम्म छेउमा पक्ष बस्ने गरेका मान्छे, साँच्चै बलियो सम्बन्ध, समय-परीक्षण र विभिन्न जीवन चुनौतीहरू छन्।
निम्न वार्षिकोत्सव विवाह दुर्लभ भन्ने तथ्यलाई बावजुद तैपनि तिनीहरू उत्पन्न गर्छन्, र यसैले अवस्थित एक सही छ।
तपाईं आफ्नो वार्षिकोत्सव मा "विवाह" गर्न के थाहा छैन भने, नाम बाट प्रेरणा ड्र। एक सामान्य नियम जस्तै, को आधार नाम छ कि भौतिक बनाइएका कुनै पनि उत्पादन दिन एक परिवार छुट्टी।
40 साल को वेडिंग - रूबी जुबिले
इङ्गल्याण्ड को प्रसिद्ध महल
कथा NS Leskov गरेको "ENCHANTED फिरन्ते": एक संक्षिप्त विश्लेषण। Leskov गरेको "ENCHANTED फिरन्ते": सारांश
लिनेन्स "स्पर्श": समीक्षा
Hitman: Absolution: सिस्टम आवश्यकताहरु। खेल Hitman: Absolution: रिलीज मिति, Cheats
वजन लागि सिमी: व्यञ्जनहरु। यसलाई वजन लागि सिमी खान सम्भव छ?
जो माछा उपनगरहरुमा अप्रिल मा समातिए? जो माछा मई को अप्रिल को शुरुवात, मध्य, अन्त्य र सुरुमा पक्रेको छ? जो माछा अप्रिल मा काला सागर मा समातिए छ?
जसलाई र कुन उद्देश्यका लागि यो सङ्कुचन मोजा लगाउन सिफारिस गरिएको छ?